Fanatsarana ny sary vaovao | Avy amin'ny Linux
Fanatsarana ny sary vaovao
herim-po | | fampiharana, famolavolana
Eto isika dia hiresaka momba ny tetikasa iray izay tsy dia fantatra loatra, ny application Photo, mpijery sary tsotra ao Qt, ho an'ireo izay tsy mila fitaovana be loatra rehefa mijery sary.
Ny mpanoratra an'ity fampiharana ity dia kicher ary azontsika atao ny misintona azy avy amin'ny Qt-Apps.
Ireto ny fanatsarana nampiana ilay kinova ankehitriny, ny sary 0.7 dia ireto manaraka ireto:
Fahaizana manitsy ny hetsika totozy amin'ny zavatra rehetra
Hetsika zana-tsipika dia azo afindra any an-tampony
Ny Control, Alt ary ny Shift dia azo ampiasaina amin'ny hitsin-dàlana
Fahafahana manodinkodina sary havia sy havanana
Zomeo amin'ny habeny tena izy
Horonana marindrano sy mitsivalana
Ao amin'ny pejin'ny tetikasa dia misy changelog izay anazavany endrika misimisy kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fanatsarana ny sary vaovao
Tsotra sy tsara tarehy ity app ity, ny fomba itiavako azy ehehe
Miala tsiny fa tsy mety amin'ny macaque hahaha
xd ao amin'ny SW ny macaques dia milahatra ahahaha, fa rehefa miditra ny chakra aho dia hanandrana, ny sary dia ehehe.
Tena tsara, nanandrana aho tamin'izaho nampiasa hareza-qt. Ankehitriny manohana ny gif, izay no tsy ampy. Heveriko fa afaka manana birao ifotony amin'ny qt aho, saingy misy ny fampiharana fototra toy ny mpamaky pdf sy ny frontend ho an'ny salama saina mbola tsy hita.
Okular dia tsy mahafeno ny zavatra ilainao amin'ny mpamaky PDF? : NA
Ny tsy hitako ao amin'ny KDE dia Browser Web tsara (nianjera i Rekonq noho ny Flash ary na dia ekeko aza ny fanesorana azy dia mbola hita ao amin'ny tranonkala maro io). Ary heveriko fa Calligra (Koffice 2, marina?) Mbola manana toerana hivoarana. Tena aleoko mahita LibreOffice sy Gimp voasoratra ao amin'ny Qt ohatra, fa hey, amin'izao fotoana izao amin'ny tantara dia tsy XD intsony.
Ary raha mangataka aho fa tsy misy xD dia aleoko maka an-katoka kokoa ny fivoarany i KDE, nolazaiko izany noho ireo Bugs manelingelina izay antony mahatonga ny fivoarana mikorontana ataon'ny tontolon'ny birao.
-> Ny feo fanombohana na fanidiana tsy mandeha intsony (na dia voamarika ao amin'ny System Notifications ary, mazava ho azy, ireo mpandahateny amin'ny xD).
-> KmenuEdit dia tsy apetraka amin'ny alàlan'ny default amin'ny KDE 4.8, lesoka BIG, ary tsy mampitandrina anao koa izy: / mila apetrakao amin'ny tanana.
-> Ho ahy manokana dia misy effets graphique izay nijanona tsy niasa intsony noho ny tarehy (nanjo ny namako koa io).
Tsia tsia, ny zava-mitranga dia ny fampiharana ny okular dia kde, ny tiako holazaina dia ny qt tsy misy fiankinan-doha kde. Okular dia tsara lavitra.
Ary eny, tsy dia nianjera loatra intsony ilay mpitety tranonkala rekonq, fa tsy feno io, ary ireo chakra dia efa nanao zavatra momba ny libreoffice sy ny qt, saingy tsy haiko hoe aiza no misy azy.
Hanam-paharetana amin'ny calligra aho izay mbola ao anaty beta, ary mivoatra haingana be.
Ao Chakra, rehefa nampiasaiko izy ireo dia nanana LibreOffice tsy misy fiankinan-doha amin'ny GTK, izay raha tsy Qt dia misy zavatra. Tsy fantatro raha hanana an'io kinova io i Arch's AUR ...
Fa ho ahy, izay efa nampiasa hatrizay ny KDE manokana, ny tena zava-dehibe dia ny browser izay manolotra ahy mitovy amin'ny Firefox. Io na ny bateria dia apetraka amin'ny Firefox Qt.
Raha ny sary dia hitsapana ity rindranasa ity aho. Amin'izao fotoana izao, mampiasa qiviewer ho mpijery sary aho, saingy mila misokatra ianao hiova.
Miombon-kevitra tanteraka amin'izay lazainao isaky ny teboka aho, mieritreritra aho fa lehibe amin'ny lafiny maro ny KDE fa tsy maintsy mitazona fiaraha-miasa sy tanjona mazava izy io.
Ny vahaolana amin'ny olana ara-peo ao amin'ny KDE 4.8 ... mandehana any amin'ny safidin'ny rafitra> fampandrenesana momba ny fampiharana ary ao anaty boaty loharanom-pahalalana dia misafidy ny sehatr'asa KDE ianao sy ilay boaty aseho amin'ity pikantsary ity:
asehonao amin'izany ny làlana mankamin'ny trano fisehoan-javatra ... izany hoe manisy marika ny làlana feno ianao amin'ny fametrahana azy /// usr / share / feo / manoloana ny feo rehetra
Faenza ve ireo sary masina?
Izy ireo no Kfaenza: http://kde-look.org/content/show.php/KFaenza?content=143890
Saingy tsy voalaza ny lafin-javatra manandanja indrindra amin'ity kinova ity…. Adika amin'ny teny espaniola izy io .. .. amiko !!!!
Tsy misy toa ilay "ary ianao?" raha ny momba azy dia namporisika ahy hiara-miasa izy ary izay no izy, namaly ahy avy hatrany i Lukas ary ny ambiny dia resaka fandikana teny hafahafa avy amin'ny sombin-tsary, exif ary zavatra.
Te-hanome hevitra vitsivitsy ho an'ny olona ao amin'ny Qt Linguist aho, rehefa nanoratra teny kely mitovy tamin'io in-7 ianao nanomboka reraka, dia tsy handratra ny fahafenoana.
Rahampitso aho manitsy ny lahatsoratra
Mahatsiravina, tsy fantatro izany, any aho mitady azy hahitako raha ao amin'ny repo izany.
KDE sy Xfce ny Desktops malaza indrindra amin'ny LinuxQuestion
Fandefasana amin'ny Linux mampiasa DLNA